SIDA LOO KEYDIYO DABACASAHA GURIGA EE XILLIGA QABOOBAHA, MA SUURTAGAL TAHAY IN LA MAYDHO SI LOO DHIGO MAQAASIINKA, IYO SIDOO KALE NOOCYADA NOOCYADU AY KU SII JIRAAN XAALAD WANAAGSAN MUDDO DHEER? - KHUDRADDA
Kaydinta kaydka ayaa ah nidaam mas'uul ah oo u baahan tababarka gaarka ah.
Waxay ku jirtaa saxnaanta hirgelinteeda waxay ku xiran tahay muddada kaydinta dalagga la goostay.
Su'aashu waxay ku saabsantahay hadday suurtogal tahay in la maydho karootada kahor inta aan la dhigin dhulka hoostiisa?
Sidaas, nooca dabacasaha jiilaalka weyn iyo sida loo diyaariyo kaydinta, tixgelin xigta.
Karootada waa nooca dalagga kaas oo ah wax badan oo la isticmaalayo. Waxaa loo isticmaalaa cusbo iyo kaydinta. Si loo keydiyo karootada ayaa koray noocyo dambe iyo bacahaoo buuxinaysa shuruudaha soo socda:
qaabka saxda ah ee dabacasaha;
Sababtoo ah heerka hoose ee tayada miiska karootada inta lagu jiro kaydinta muddada dheer, qayb ka mid ah dalagga ayaa laga yaabaa in gabi ahaanba lumo.
Si aad u dhaqdo ama u maydho?
Si aad u dhaqdo ama ma loo dhaqo goosashada? Waxay ku xiran tahay wadarta guud ee karootiga. Haddii iyada, tusaale ahaan, 10 baaldiyo, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad go'aansato haddii ay jirto wakhti tani, xoog, biyo, meel lagu qalajiyo dalagyada xididka. Haddii wax walba la heli karo, waxaad sii wadi kartaa diyaarinta dalagyada xididka.
Karootada saafiga ah waxaa lagu kaydin doonaa wax ka badan intii aan la dhaqin. Dhulka waxaa laga yaabaa inuu yahay cudurada cudurada kala duwan iyo kallana.
Intaa waxaa dheer, on duub cad oo dhan waxyeello waa dareemi, xitaa ugu yar: Gawracatada, dildilaaca yaryar, xoqan. Horeba waa la maydhay oo loo kala soocay dabacasaha oo ku dul dhejiyay dhagxaan.
Digniin! Waa suurtagal in la qalajiyo qorraxda, sida xididada ay waayaan qoyaan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan haddii ay suurtagal tahay in la maydho dabacasaha ka hor inta aan la dhigin kaydinta iyo sida loo sameeyo si sax ah, halkan ka akhri.
Haddii dalagga la dhaqay uu ku jiro Maqsin heerkul ah 0 ilaa +3 ° C iyo qoyaan qaraabo aan ka badnayn 90%, waxay noqon doontaa 6 bilood.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nolol maalmeedka dabacasaha waxaa laga heli karaa arrintan.
Baqashada, noocyada soo socda ee dabacasaha for kaydinta yihiin baahida weyn:
Boqoradda xilliga dayrta. Tani waa noocyo macaan. Miraha midkoodna maaha mid miiran. Waxay leeyihiin dherer 25-30 cm Waxaad kaydin kartaa ugu yaraan hal sano.
Jiilaalka qabow Fasalka caalamiga ah oo ku kala duwan waxsoosaarka sare. Wuxuu kuu ogolaanayaa in aad u koraan midhaha dhadhanka qani ah, dhererkiisu 20 cm.
Emperor. Waxay u adkaysato cudurka. Si habboon u bedeleysa kaydinta dheeraadka ah iyo gaadiidka. Dhererka miro waa 25-30 cm.
Flacoro. Fasalka wuxuu siinayaa dalag sare, dalagyo xidid weyn. Waxay yihiin macaan, dhererkoodu wuxuu ilaa 28 cm yahay.
Vitamin 6. Miraha waxaa si fiican loo kaydiyaa, iyada oo aan luminayo tayada dibadda iyo dhadhanka. Miraha waa qulqulo muuqaal ah, qaabkoodu waa 15 cm.
Vita Long Kala duwanaanshahan waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan kaydinta. Miraha ay u adkaysato noocyada kala duwan ee kallana. Isku ururinta si qurux badan loo kaydiyo gaadiidka gaadiidka waxaa loo isticmaali karaa mid cusub iyo ilaalin.
Flakke. Tani waa kala duwanaansho laga keeno taas oo kuu ogolaanaysa inaad hesho dalag weyn oo ka mid ah gobollada Ruushka. Miraha waa weyn oo dheer, waxay leeyihiin dhadhan fiican. Nooca fasal ee iska caabin ah wakiilada keena cudurrada, dilaaca iyo kaydinta dheer.
Fursad. Kala duwan ayaa leh dhalid sare, iska caabin ah qabow, cudurada. Waxyaallaha miraha waxaa lagu kala soocayaa casiir wanaagsan iyo dhadhan wanaagsan.
Cascade F1. Miraha waa gaaban, jidhka waa casiir leh oo casaan leh. Iskuduwaha ayaa iska caabisa cudurada, ku habboon kaydinta muddada dheer. Waxaa loo isticmaali karaa qaab saafi ah, adigoo riixaya kuna karinaya cunnuga cuntada.
Ku saabsan noocyada nooca ugu wanaagsan ee loogu talagalay karootada kaydinta xilliga jiilaalka, akhriso maqaalkeena.
Sidee loo badbaadiyaa khudradda cagaaran ee xilliga jiilaalka?
Sidee loo xafidaa goosashada mayridda xilliga qaboobaha xaaladaha gudaha? Sidaa daraadeed xididdada la goostay waxay sii hayaan dhadhanka iyo muuqaalka intii suurta gal ah, Waxaad u baahan tahay inaad raacdo qorshahan soo socda:
Khudaarta cagaaran ee wasakh ah oo aad u dhaqdo, ku rid hoose hoostiisa oo qalalan. Waa inaysan ka tegin qoyaan badan, maadaama ay si xun u saameeyeen ilaalinta dalagga.
Qeybta hoose ku rakib sanduuqyada. Waxaad iyaga ka buuxin kartaa ciid ama balka. Ku rid dabacasaha. Sanduuqyada waa in lagu dhajiyaa dhererka 1 mitir dhulka. Intii aad sanduuq sanduuq ah waxaad isticmaali kartaa bacaha balaastigga ah. Waxay ku jiifsadeen foosto alwaax ah. Ha ku xirin bacaha si adag, haddii kale qoyaanka ayaa ka dhex abuuri doona gudaha.
Heerkulka cimilada ugu fiican ee karootada waa 0 ... + 5 ° qoyaanka 90%. Wareegga hawadu waa inuu noqdaa mid liita.
Badbaadinta karootada dhulka hoostiisa waxaa kaliya oo la bixin karaa haddii aysan biyuhu daadin.
Haddii aysan jirin maqnaansho, waxaad samayn kartaa iyada oo aan lahayn. Si arrintan loo sameeyo, waxaad yeelan doontaa inaad qodo dalool dhulka ku jira, ka ilaali oo ka buuxi kor. Iyada oo habkan, dalagga waxaa lagu badbaadin karaa ilaa guga.
Kaydinta karootada dhaqday xilliga qaboobaha:
Habka loo xafidayo dabacasaha aan la dhaq-dhaqaaqin sidoo kale wuxuu leeyahay sifooyinkiisa:
Goynta miraha dalaggu wuxuu ku baahsan yahay hoostiisa oo si fiican u qalaji. Ka ilaali safarada qorraxda inay ka dhacaan dabacasaha. Intaa waxaa dheer, 2 maalmood ka hor kaydinta waa la keydiyaa, qaboojiso si heerkul ah 0 darajo.
Hadda waa waqtigii la samayn lahaa diyaarinta qolka. Waa inay noqotaa mid qalalan, iyo nidaamka heerkulka waa in uu ahaado 10-12 degrees Celsius. Qoyaanku ma aha mid ka hooseeya 90-95%. Qolalka aad u kulul waxay ku haboontahay, maadaama qoyaanku bilaabo inuu ka soo baxo dabacasaha, iyo dalagyada xididdada ayaa xoqaya. Caadi ahaan, 1 t of dabacasaha ka baxo 16 g oo qoyaan inta lagu jiro kaydinta.
Nadiifinta kaydinta iyo sawir qaadaha xalalka naxaasta ah ee bakteeriyada.
Xulo karootada leh cillado, maadaama aysan ku habooneyn kaydinta.
Qoraalka. Marka dhammaan tallaabooyinka diyaarinta ah la dhameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in la go'aamiyo habka kaydinta karootada aan loo baahneyn.
Waxaa jira dhowr ka mid ah:
In badan oo ku jiri Maqsin. Habkani wuxuu ka mid yahay kuwa ugu waxtarka badan. Xaaladdan oo kale, dhulka hoostiisa waa inaan la qaboojin xilliga qaboobaha iyo sharadka. Intaas waxaa sii dheer, dabacasaha dabacsan ee dhulka hoostiisa ah, oo ku dulqaata dabaqa sare fogaan ah 1 m.
In ciidda. Habkani waa mid shaqeynaya, laakiin beergooyinku waxay ku jirtaa waqti dheer. Diyaarso sanduuq alwaax ah, ku dabool carrada oo leh lakab ilaa 3 m. Fidinta khudradda xididka ka koreysa si aysan u taaban. Xagga sare ayaa mar kale yimaada lakabka ciid, 1.5 cm qaro weyn.
Sanduuqyada iyo dambiilaha. Khudaarta caleemaha waxay daboolaan lakab khafiif ah oo dhoobo ah ama lime lakulmay. Joogista xalka waa inuu u eg yahay labeen dhanaan (10 litir oo biyo ah 1 kg lime ama dhoobo). Si loo xalliyo xakameynta dabacasaha dabacasaha, ku faaf ilaa 1-2 maalmood meeshi wanaagsan. Sababtoo ah filimka la sameeyay ayaa abuuraya ilaalin lagu kalsoonaan karo oo kallanaayo iyo lafdhabarta. Ku xidhan xididada qallalan ee sanduuq ballaaran oo qotodheer.
Bacaha bacaha. Awoodooda waa inay ahaadaan 30-35 kg. Ka dib markaad buuxiso bacda, ha xirin. Kaliya marka neefsashada neefsashadu ka soo baxdo carbon dioxide, taas oo ah difaac aad u fiican oo ka dhan ah horumarinta cudurrada. Bacaha si adag u dhig miiska. Laakiin inta badan doorashadan waxaa loo isticmaalaa kaydinta warshadaha.
Waxaa jira siyaabo kale oo badan oo lagu keydiyo dabacasaha xilliga jiilaalka, waxyaabaha hoos ku qoran ayaa kaa caawin doona inaad doorato midka kugu habboon:
Sida loo badbaadiyo khudaarta cagaaran ee guriga xilliga qaboobaha, haddii aanay jirin maqaasiinka?
Sida loo ilaaliyo karootada beerta ilaa guga?
Sida loo keydiyo karootada dhalooyinka iyo sanduuqyada?
Sifooyinka dabacasaha dabka qaboojiyaha.
Halkee ayaa ah meesha ugu fiican ee lagu kaydiyo khudradda cagaaran ee guryaha?
Kaydinta karootada xilliga qaboobaha ee balakoonka.
Sidee loo ilaaliyaa dabacasaha ilaa guga cusub?
Ma kar karaa karootada dufan ee xilliga jiilaalka?
Si aad u sii wadato dabacasaha intii suuragal ah, waa inaad u hoggaansantaa xaaladaha soo socda:
Qolka waa in lagu qalabeeyaa hawo tayo sare leh.
Marka hore, ka dib goosashada, karootada waxay u nugul yihiin uumi aad u kacsan, taas oo ka dhalatay, oo ah qoyaanka hawada oo hooseeya, waxay bilaabi doontaa in ay lumiso qoyaan iyo si dhakhso ah u tagaan. Sidaas darteed qoyaanka ugu wanaagsan waa 90%.
Intaa waxaa dheer, marka kaydinta dalagga, hubi inaad xoqdo xididada, ka dib talooyinka soo socda:
Si aad uga saarto dushooda marka goosashada, tegaayo boog yar.
Ka dib markii la jaray karootada "dameer". Waxaa laga jaraa 1 illaa 3 cm, wax kasta oo halkan kuxiran waxay ku xiran tahay burburka hadda jira.
Iska yaree xididka of karooto, halkaas oo dhexroorka ee dabada ku noqon doonaa 5 cm.
Isticmaal mindi fiiqan oo haraaga ah. Mindhicirka waa inuu ahaado mid siman oo siman.
Ka dib markii manjooyin, xaleef ah waa in si fiican loo qalajiyey.
Wax badan ka baro sida loo habeeyo dabacasaha xilliga jiilaalka, waxaad ka heli kartaa halkan, iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan diyaarinta habboon ee xididka kaydinta waxaad ka heli kartaa halkan.
Kaydinta karootada dhaqday ma ahan mid adag, laakiin waa muhiim. Foomkan, dalagga ayaa lagu keydin doonaa muddo dheer, ilaalinta muuqaalkiisa iyo dhadhankiisa. Waxa kaliya oo kaliya ay tahay in la doorto habka ku haboon ee ilaalinta dalagyada xididada iyo si adag u raacaan talooyinka la soo bandhigay.